साँझको तयारीमा जुट्यो डेभिजफल क्लब ! – Nidar News
साँझको तयारीमा जुट्यो डेभिजफल क्लब !
रमाइलो बेस्मारी रमाइलोको थिममा डेभिज फल क्लब पोखराले छोरेपाटन साँझको तयारी थालेको छ । क्लबले शनिबार प्रेसमिट आयोजना गरी कात्तिक २ गते कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सांगीतिक साँझको उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउँदै क्लबका अध्यक्ष खेमराज बराल पुष्पले नेपाल सरकारले तय गरेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउ पु¥याउन साँझको आयोजना गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भ्रमण वर्षलाई स्वागत गर्ने र क्लबद्वारा सुरु गरिएको फुटबल एकेडेमीलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने हाम्रो योजना हो । बरालका अनुसार सांगितिक साँझमा चर्चित ब्याण्ड १९७४ एडीलाई निम्त्याइनेछ भने कार्यक्रम छोरेपाटनमा आयोजना हुनेछ ।
प्रेसमिटमा साँझका कार्यक्रम संयोजक कुमार गुरुङले सम्भावित आय व्ययबारे उल्लेख गरे । गुरुङका अनुसार कार्यक्रम आयोजना गर्न करीब २५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । त्यस्तै ३२ लाख रुपैयाँ अनुमानित आम्दानीको लक्ष्य लिइएको उनले जनाए । आम्दानी रकम प्रायोजक र टिकटबाट उठ्ने क्लबको अपेक्षा रहेको छ ।
पोखरा १७ मा सक्रिय यस क्लबले विगत ९ वर्ष देखि स्थानीयस्तरमा विविध काम गर्दै आएको छ । जसमध्ये एम्बुलेन्स सञ्चालन, खेलकुद प्रतियोगिता, सीसी क्यामेरा जडान लगायत कार्य प्रमुख छन् । हाल क्लबले फुटबल एकेडेमीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिदमा जुटेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा डेंगु रोगकाे पर्याप्त अनुसन्धान !
अबको चुनावमा आफू लड्ने तयारी : कांग्रेस नेताको भनाइ